सन्दर्भ भूकम्प सुरक्षा दिवस : धरहरासँगै झरेका रुपचन लिफ्ट चढ्न डराउँछन् ! – Merodesh.news
सन्दर्भ भूकम्प सुरक्षा दिवस : धरहरासँगै झरेका रुपचन लिफ्ट चढ्न डराउँछन् !
३ माघ २०७५ मेरोदेश सम्वाददाता
वि.स. २०७२ साल बैसाख १२ गतेको बिनासकारी भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति भयो । भूकम्पका कारण ऐतिहासिक स्थल धरहरा पनि ढल्यो । २०७२ साल बैसाख १२ गते शनिवार बिहान करिब १२ गएको भूकम्पका कारण ढलेको धरहराले पुरिएर धेरैको ज्यान गयो । धरहराको टुप्पोबाट झरेर केहीले पूर्नजीवन पाए । पूर्नजीवन पाउनेमध्येका एक हुन्, इटहरी १९ सुनसरीका २४ वर्षीय रुपचन चौधरी ।
नेपाल प्रहरीको असाई पदमा कार्यरत उनी पहिलो पटक काठमाडौं जा“दा भूकम्पमा परे । भूकम्पको चोटपछि ३५ दिन अस्पताल बसेर जागिरे जीवनमा फर्किएका उनले आफ्नो अनुभव यसरी सुनाए–
बैशाख पहिलो साता नेपाल प्रहरीको असाई पदमा नाम निस्किएपछि बुबासँग काठमाडौं गए । पहिलो पटक काठमाडौं गएर बालाजुस्थित फूपाजुको डेरामा पू¥याएर बुबा घर फर्कनु भयो । बुबाको काम पनि धेरै थियो ।
बैशाख ११ गते शुक्रबार म काठमाडौं पुगेको थिएँ । शनिबार दिनभरी टिभी हेरेर बस्ने योजना थियो । तर, शनिवार बिहानै फूपाजु नरहरि चौधरीले पशुपति मन्दिर दर्शन जाउ भन्नुभयो । मन्दिर दर्शनपछि डेरा आएर खाना खाएपछि फूपाजुले फेरी घुम्न जाउँ भन्नुभयो ।
प्लम्बरको काम गर्ने फूपाजुको डेरा बालाजुमा थियो । बालाजु हुँदै बसुन्धारा र काठमाडौं मल घुमेपछि फूपाजुले धरहरा लैजानुभयो । शनिवार बिहान साढे ११ बजेको थियो । धरहरामा छुट्टी मनाउन आउनेको संख्या बढ्दै थियो ।
मलाई काठमाडौं देखाउन फूपाजूले धरहरा चढ्ने टिकट काट्नु भयो । वर्षाैसम्म काठमाडौं बस्दा पनि फूपाजुले धरहरा चढ्नु भएको थिएन् । मलाई धरहरा चढ्ने भित्री इच्छा थिएन । तर, टिकट काटेपछि फूपाजु र म टुप्पोसम्म गयौं । पहिलोपटक धरहराबाट काठमाडौं हेरेर फर्कन खोज्दा भूइचालो आयो । फूपाजुले बित्नुभयो । म भाग्यले बाचेँ ।
भुकम्प जानु अघि रुपचन ले लिएको धरहराको तस्बिर
ई वर्षअघिको घटना सम्झँदा अहिलेपनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ । अहिले लिफ्ट चढ्न पनि डर लाग्छ । लिफ्ट चढ्दा धरहराबाट झरेको जस्तै हुन्छ । धरहराबाट एक फन्को लगाएर उपत्यका हेरेपछि तल ओर्लन हतार गरिरहेको थिएँ । तर, फुपाजुले एकछिन पख भनेपछि ढोकाको चौकट समाएर रोकिएँ ।
धरहरबाट घुमेर हेर्दा डराइरहेको थिएँ । ढोका समातेर बसेको थिएँ । तर, ढोका पनि हल्लियो । अझ दह्रो समाउँदा धरहरा पिङ खेले जस्तै भयो । धरहराको टुप्पोबाट काठमाडौंलाई हेर्दै गरेका मान्छेहरुमा कोलाहल मच्चियो । भगवनको नाम जप्दै मान्छेहरु तल झर्न तछाडमछाड गर्दै थिए । कोलाहलले गर्दा फूपाजुसँको साथ पनि छुट्यो । धरहराको टुप्पोमामा रहेको ढोकाको चौकट समातेको थिएँ । तर, धरहरा बिस्तारै बस्न थाल्यो । धरहरा लिफ्ट जसरी तल झर्दै थियो । हात दह्रो समातेर बसिरहदाँ ठूलो आवाज आयो ।
ब्यूझँदा भग्नावशेस धरहरामाथि लडीरहेको थिए“ । धूलोले गर्दा टाढासम्म देख्न सकिँन् । उठ्न खोजेँ तर हात खुट्टा दुख्यो । आँखा भने टुलुटुलु हेरिरहेँ । छेउछाउ मान्छे चिच्याइरहेका थिए । उठ्न नसकेपनि छेउछाउको दृश्य हेरिहेरदाँ कसैले हल्लायो । ‘एैय्या भनेपछि ती ब्यक्तिले भने, ‘ए जिउँदै छ अस्पताल लैजाउँ ।’
भ्यानमा हालेर एकै छिनमा वीर अस्पताल पु¥याए । मोबाइल कत्ता हरायो थाहा भएन् । आफू घाइते भएको खबर घरमा सुनाउन लगाए । अस्पतालमा मृतकको शव लहरै राखिएको थियो । इमरजेन्सीको एउटा बेडमा म थिएँ । विरामी आउनेक्रंम बढ्दै थियो । अस्तव्यस्त अस्पतालमा मेरो छेउबाट लास लहरै राखियो ।
धरहरासँगै भुईंमा झर्दा गर्धन, तिघ्रा र शरीरका भित्री भागमा चोट लागेको रहेछ । एकदिन वीरमा बसेपछि आफन्त आउनुभयो । भोलिपल्ट जनमैत्री अस्पताल लगियो । दुई दिनसम्म फूपाजुको पत्ता लागेको थिएन् । तेस्रो दिन प्रहरीले उत्खनन गरी शव निकाल्यो । ओर्लने क्रममा फूपाजुको धरहराले किचेर खुट्टा र गर्धन भाँचिएको रहेछ ।
रुपचन अस्पतालमा रहँदा
इटहरीमा स्नातक दोस्रो वर्ष अध्ययन गर्दैगर्दा प्रहरीमा भर्ती भएपनि दुर्घटनापछि प्रथम तालिम लिन सकिँन् । २०७२ सालमा नै लिनुपर्ने तालिम दुई वर्ष आराम गरेर २०७४ सालमा पूरा गरे । त्यो दुई वर्षको अवधिमा क्षेत्रीय प्रहरी तालिक केन्द्र विराटनगर र इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा अफिस भित्रको काम गरे ।
गत भदौदेखि इलाका प्रहरी कार्यालय रानीमा पोष्टिङ छ । बेला–बेला त्यो घटना सपना जस्तै लाग्छ । ‘कहिलेकाही त धेरै चिज गुमाए जस्तो लाग्छ । फेरि आफैंलाई सम्झाउँछु, तेत्रो माथिबाट झरेरपनि देशका लागि केही गर्न बाँचेछु जस्तो लाग्छ ।
रुपचनले बनाएको तस्बिर
स्कूल तहमा राम्रो प्रिन्टिङ गर्थेँ तर दुर्घटनापछि केहि बनाएको छैन् । प्रहरी सेवासंगै फुर्सदमा चित्र कोर्न मन छ । (कुराकानीमा आधारित)
‘ईन्द्र बहादुर आङ्बो एक प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री हुन् । सशस्त्र माओवादी जनयुद्धमा लडाकु कमाण्डरको अनुभव सँगालेका युवा उमेरका उनी प्रस्ट र पारदर्शी काम रुचाउँछन् । संघीय सरकारले[...]